ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: Believe
မှတ်ချက်။ ။၂၀၀၄ အာရုံ.......
စာရေးသူ Unknown အချိန် 7:54 PM
ညလင်းအိမ် November 25, 2009 at 10:23 PM
ဒဏ္ဍာရီ November 25, 2009 at 10:36 PM
ကိုချမ်းလင်းနေ ကဗျာလေး လာဖတ်တယ်နော်။
ကိုယ့်လိပ်ပြာလုံဖို့ ရှေ့ရှုရင်း တွေဝေခြင်းတွေ ကင်းဝေးလို့ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်နိုင်ပါစေ...
သိင်္ဂါကျော် November 25, 2009 at 11:19 PM
ဘူတာအိုထဲက ပြေးမထွက်နိုင်သူ မို့
မောင်သီဟ November 25, 2009 at 11:54 PM
အနော် November 26, 2009 at 12:59 AM
ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေပေမဲ့လဲ ယုံကြည်ချက်အလင်းနဲ့ တောက်ပစေရမှာပေါ့ အကို
ကဗျာလေး ခံစားသွားတယ်ဗျို့ :)
စည်းရိုး November 26, 2009 at 1:14 AM
လင်းသင် ဆိုတာ နောက်နာမည်တစ်မျိုးလားဗျ
တဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖွဲ့
သြော်ကိုယ်ကလည်း ပုထုဇဉ်ကိုးဗျ နော့
မိုးစက်အိမ် November 26, 2009 at 3:55 AM
ယုံကြည်ချက် ရှိဖို့ ရာ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံ
ဖို့ ဆိုတာ အရေးကြီးတယ် . . . ဒါကိုဖွဲ့ ဆိုသွား
တာ ကောင်းတယ် အစ်ကို . . .
ဂျပန်ကောင်လေး November 26, 2009 at 8:48 AM
ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး.. ကျွန်တော်က ကဗျာရဲ့ ဆိုလိုရင်းတွေကို ထွင်းဖောက်မြင်တတ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းပိန်းတယ်... တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ပဲ တွေးသွားပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေရေ....း)
~ဏီလင်းညို~ November 26, 2009 at 9:44 AM
ကဗျာလေးလာဖတ်ရင်း..ကျွန်တော်လည်း...ကိုယ့်လိပ်ပြာလုံဖို့ တွေဝေသွားမိသလိုပဲ... ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ...။
မချစ်ရ November 26, 2009 at 3:00 PM
မျောလွင့်လွင့် စိတ်ကူးလေးတွေဖြစ်သွားပြီ :)
မြစ်ကျိုးအင်း November 27, 2009 at 6:14 AM
ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံတယ်ဆို တွေဝေနေဖို့ မလိုပါဘူး
တချို့ပုံသေနည်းတွေက လွတ်လပ်မှုတချို့ကို ပိတ်ပင် ထားတယ်။
desertraindrops December 4, 2009 at 3:23 PM
မိုက်တယ် ကဗျာလေး ကောင်းတယ်။ ပုံသေနည်းထဲကနေတော့ ပြေးချင်ပေမဲ့ လည်နေတယ် ကိုချမ်းရေ..